PP Honeycomb Board Extrusion Line - China PP Honeycomb Board Extrusion mpamatsy, Factory –Jwell
Ny tontonana sandwich telo sosona noforonin'ny extrusion, sosona roa manify ary rafitra tantely ao afovoany.
Ny tabilaon'ny tantely PP dia azo aorina ihany koa, lamba mifono lamba sy hoditra voasarona amin'ny lafiny roa indray mandeha. Manana tombony amin'ny lanja maivana, tanjaka avo, tsy misy poizina, fanetsiketsehana mihozongozona ary mahatohitra mangatsiaka, tsy miova feo & mitahiry hafanana, moistureproof & insulation hafanana sns.
Ampiasaina amin'ny tabilao fanaronan'ny kamio fiara, clapboard trunk, substrate karpet vatan-kazo, tabilao fandravahana amin'ny rindrina, valindrihana sns.
Azo ampiasaina amin'ny famokarana boaty fonosana tanjaka mahery isan-karazany.
Ny hatevin'ny vokatra
PE, PP Wood-Plastika Decking Extrusion Line
PP, PE, ABS, tsipika fanamafisana takelaka matevina amin'ny PVC
Jwell DYPS-S crusher ravin